China Duplex သံမဏိ 2205 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | Sekonic
duplex သံမဏိ 2205
ဘုံကုန်သွယ်ရေးအမည်များ: 2205, UNS S32205, 00Cr22Ni5Mo3N,W.Nr 1,4462
duplex အစွန်းခံသံမဏိ 2205 အလွိုင်းတစ် duplex ဖြစ်ပါတယ် အစွန်းခံသံမဏိ ၂၂% ခရိုမီယမ်၊ 2.5% molybdenum နှင့် 4.5% နီကယ် - နိုက်ထရိုဂျင်သတ္တုစပ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မြင့်တယ် ခွန်အား ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုခိုင်ခံ့မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောခြုံငုံ။ ဒေသတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုတိုက်စားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။၏အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိကို 2205 duplex သံမဏိ သံမဏိ နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုသည် သာမန်၏ austenitic သံမဏိ ။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်ဒီဇိုင်နာများအားထုတ်ကုန်များဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချစေသည်၊ ၎င်းသတ္တုစပ်သည် ၃၁၆ နှင့် ၃၁၇L တို့ထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ ၎င်းသတ္တုစပ်သည်အပူချိန် -50 ° F / + 600 ° F အတွက်အထူးသင့်တော်သည်.
duplex သံမဏိ 2205 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု C Si Mn P S Cr နီ မိုး N
စံ .030.03 .001.00 .002.00 .040.04 .030.03 21,0 ~ 24,0 4.5 ~ 6.5 2.5 ~ 3.5 0,08 ~ 0.2
ယေဘူယျ 0,025 ၀.၆ ၁.၅ 0,026 0,001 ၂၂.၅ ၅.၈ ၃.၀ ၀.၁၆
Duplex သံမဏိ 2205 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
၇.၈ ဂရမ် / cm³
2525- 2630 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်
duplex သံမဏိ 2205 စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ
Brinell မာကျော HB
duplex သံမဏိ 2205 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ASME SA 182, ASME SA 240, ASME SA 479, ASME SA 789, ASME SA 789 ပုဒ်မ IV Code ကိုဖြစ်ရပ်မှန် 2603
ASTM A 240, ASTM A 276, ASTM A 276 အခြေအနေ A, ASTM A 276 အခြေအနေ S, ASTM A 479, ASTM A 790
NACE MR0175 / က ISO 15156
Sekonic Metals ရှိ Duplex သံမဏိ 2205 ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်များ
သံမဏိ 2205 ဘား & လှံတံ
သံမဏိ 2205 ဝါယာကြိုး
သံမဏိ 2205 စာရွက် & ပန်းကန်
သံမဏိ 2205 ချောမွေ့ပြွန် & ဂဟေဆော်ပိုက်
သံမဏိ 2205 ချွတ် & ကွိုင်
သံမဏိ 2205 စွဲစေ
အဘယ်ကြောင့် duplex သံမဏိ 2205 ?
၁) အထွက်နှုန်း၏စွမ်းအားသည်သာမာန် Austenitic သံမဏိထက်နှစ်ဆပိုများသည်။ ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်
လုံလောက်သောပလပ်စတစ်။ duplex သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသိုလှောင်ကန်များသို့မဟုတ်ဖိအားပေးသည့်ရေယာဉ်များ၏နံရံအထူသည်အသုံးများသော austenite ထက် ၃၀ မှ ၅၀% လျော့နည်းသည်၊ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အကျိုးရှိသည်။
၂) စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်အက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သံမဏိပါဝင်မှုအနည်းဆုံးသော duplex သံမဏိပင်လျှင်အထူးသဖြင့်ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများပါ ၀ င်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် austenitic stainless steel ထက်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ချခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Stress ချေးခြင်းသည်ထင်ရှားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသာမာန် Austenitic သံမဏိများအတွက်ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။
၃) မီဒီယာတော်တော်များများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသော ၂၂၅၅ သံမဏိသံချေး၏ခံနိုင်ရည်သည်သာမန် 316L austenitic သံမဏိများထက်သာလွန်သည်။ စူပါ duplex သံမဏိသည်အလွန်မြင့်မားသောချေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အချို့သောမီဒီယာများတွင် acetic acid နှင့် formic acid ကဲ့သို့သော high-alloy austenitic stainless steel နှင့် corrosion-steel alloys များကိုပင်အစားထိုးနိုင်သည်။
၄။ ၄ င်းသည်ကောင်းမွန်သောဒေသခံချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Austenitic သံမဏိနှင့်တူညီသောအလွိုင်းပါ ၀ င်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ wear corrosion ခုခံနိုင်မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောချေးခြင်းသည် austenitic stainless steel ထက်ပိုကောင်းသည်။
5) linear ချဲ့ထွင်မှု၏ကိန်းကာဗွန်သံမဏိ၏အနီးကပ်ဖြစ်သော austenitic သံမဏိ၏အနိမ့်သည်။ ၎င်းသည်ကာဗွန်သံမဏိများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင့်လျော်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအရေးပါမှု၊ ဥပမာပေါင်းစပ်ထားသောပြားများသို့မဟုတ်အကာများထုတ်လုပ်ခြင်း။
၆) ပြောင်းလဲနေသောသို့မဟုတ်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည် austenitic stainless steel ထက်စွမ်းအင်မြင့်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ တိုက်မိခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သောရုတ်တရက်မတော်တဆမှုများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ duplex သံမဏိသိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များရှိပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။
Duplex သံမဏိ 2205 လျှောက်လွှာ：
ဖိအားခံအိုးများ၊ ဖိအားမြင့်သိုလှောင်ကန်များ၊ ဖိအားမြင့်ပိုက်များ၊
• ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူလုပ်ငန်းခွဲခြားသူများ၊ အရောင်ချွတ်စက်များ၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းစနစ်များ။
• မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်တိုက်စားမှုခံနိုင်ရည်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လှည့်လည်နေသောရိုးတံများ၊ စာနယ်ဇင်းလိပ်များ၊ ဓါးသွားများ၊
ရှေ့သို့ သံမဏိ F55 ဘား / Plate / ပိုက်
နောက်တစ်ခု: TIG / MIG ERNiFeCr-2 Inconel 718 ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုး
ဂြိုဟ်တုလက်စွပ်, ဂဟေဝါယာကြိုး, ဂြိုလ်တု 6, ဂြိုလ်တု 6B, ဟေး 25 ဝါယာကြိုး, အလွိုင်း R26 မူလီ,